Hunter Hunter (2020) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 6.4/10 5979 votes
နာမညျကို ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ အမဲလိုကျတဲ့ကား ဆိုတာ သိကွမှာပါ။ ဆိုတော့ ….. အမဲလိုကျတဲ့ကားတှေ
ကွိုကျတတျတဲ့လူတှေ သဘောကမြယျ့ကားမြိုးပါပဲ။ ဘဝဟာ မုဆိုးတဈလှညျ့ သားကောငျတဈလှညျ့ပါပဲ။လေးဖွူရဲ့အမဲလိုကျမုဆိုး သီခငျြးထဲကလိုပေါ့ဗြာ။ မုဆိုးကွီး ဂြိုးဆကျတို့ သားအမိသားအဖ ၃ ယောကျဟာတောထဲမှာ အိမျကလေးဆောကျပွီး နကွေပွီး အမဲလိုကျတဲ့အလုပျနဲ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးပွုကွတာပါ။
သူတို့ကို ခွိမျးခွောကျနိုငျတာကတော့ ဝံပုလှတေဈကောငျပါပဲ။ ပုံမှနျဆိုရငျ လူက မုဆိုး တိရစ်ဆာနျက သားကောငျပါ။တိရစ်ဆာနျက မုဆိုး ဖွဈပွီး လူက သားကောငျဖွဈတဲ့အခြိနျမှာတော့ ….. Horror, Thriller ကွိုကျသူမြားအသညျးတယားယား ရငျတဖိုဖိုနဲ့ ဇာတျကို အဆုံးထိ ရောကျလို့ ရောကျမှနျးမသိအောငျှဲချေါသှားမယျ့ ဇာတျကားမြိုးပါပဲ။ IMDb Rating – 6.3/10 ရရှိထားပွီး . Thriller ကား ကွိုကျနှဈသကျသူတှအေတှကျတော့ကွညျ့ကောငျးမယျ့ကားမြိုးဖွဈပါလိမျ့မယျ
နာမည်ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အမဲလိုက်တဲ့ကား ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ ဆိုတော့ ….. အမဲလိုက်တဲ့ကားတွေ
ကြိုက်တတ်တဲ့လူတွေ သဘောကျမယ့်ကားမျိုးပါပဲ။ ဘဝဟာ မုဆိုးတစ်လှည့် သားကောင်တစ်လှည့်ပါပဲ။လေးဖြူရဲ့အမဲလိုက်မုဆိုး သီချင်းထဲကလိုပေါ့ဗျာ။ မုဆိုးကြီး ဂျိုးဆက်တို့ သားအမိသားအဖ ၃ ယောက်ဟာတောထဲမှာ အိမ်ကလေးဆောက်ပြီး နေကြပြီး အမဲလိုက်တဲ့အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြတာပါ။
သူတို့ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်တာကတော့ ဝံပုလွေတစ်ကောင်ပါပဲ။ ပုံမှန်ဆိုရင် လူက မုဆိုး တိရစ္ဆာန်က သားကောင်ပါ။တိရစ္ဆာန်က မုဆိုး ဖြစ်ပြီး လူက သားကောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ….. Horror, Thriller ကြိုက်သူများအသည်းတယားယား ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ဇာတ်ကို အဆုံးထိ ရောက်လို့ ရောက်မှန်းမသိအောင်ွဲခေါ်သွားမယ့် ဇာတ်ကားမျိုးပါပဲ။ IMDb Rating – 6.3/10 ရရှိထားပြီး . Thriller ကား ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်တော့ကြည့်ကောင်းမယ့်ကားမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
Blake Taylor Camille Sullivan Devon Sawa Erik Athavale Gabriel Daniels Jade Michael Karl Thordarson Lauren Cochrane Nick Stahl Summer H. Howell
Blake Taylor Camille Sullivan Devon Sawa Erik Athavale Gabriel Daniels Jade Michael Karl Thordarson Lauren Cochrane Nick Stahl Sarah Constible Summer H. Howell
Option 1 teracloud.jp 436 MB SD (480p)
Option2onedrive.live.com 436 MB SD (480p)
Option3teracloud.jp 1 GB HD (1080p)
Option4onedrive.live.com 1 GB HD (1080p)
Option5teracloud.jp 2.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option6onedrive.live.com 2.6 GB FHD (1080p) DTS 5.1